19 Oct 2018 . 11:01 AM
Samsung ကတော့ အလန်းစား Specs တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Galaxy Book2Tablet အသစ်ကို မိတ်ဆက်ထားလိုက်ပါပြီ။ တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပဲရှိတယ်၊ Gigabit အမျိုးစား LTE စနစ်လည်းပါတယ်၊ Laptop Display ထဲမှာတောင် မြင်ရခဲတဲ့ OLED Panel ပိုင်ဆိုင်ထားတာမလို့ Samsung Tablet က ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံးနဲ့ Business သမားတွေ မျက်စိကြစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပြီလား?
မှန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Microsoft ကြေညာထားတဲ့ Surface Pro6ထက်တောင် ပိုဈေးသက်သာနေသလို Tablet တစ်လုံး လိုအပ်ချက်၊ Function ပိုင်းချင်း ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Samsung ပိုပြည့်စုံနေတဲ့ အနေထားမှာရှိပါတယ်။
Along with S Pen
Windows 10 S သုံးထားတယ်၊ ဘက်ထရီကလည်း နာရီ ၂၀ ဆက်တိုက်အသုံးခံတယ်၊ အသံပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Dolby Atmos ထောက်ပံ့ထားတယ်။ နောက်ပြီး Galaxy Smartphone တွေလို Speaker တွေကို AKG နဲ့ ချိန်ညှိပေးထားတယ်၊ Fingerprint Reader လည်းပါတယ်။
ဒါတွေပြီးသွားရင် အထင်ကြီးစရာဖြစ်လာတာက Stand အသစ်၊ သူ့ပုံစံက Surface Stand လို ထောက်ကန်ပေးနိုင်ပြီး Angle ကို လိုသလို Adjust လုပ်နိုင်မယ်။ နောက်ပြီး Tablet နဲ့ တွဲသုံးနိုင်မယ့် Magnetic Keyboard လည်းပါလာခဲ့တယ်။ ဒီ ၂ ချက်က Galaxy Book2မှာ သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေလို့ ပြောရမှာပါ။
Removable Magnetic Keyboard
ဒီ Galaxy Book2ကို အားမရဆုံးတစ်ချက်က 4GB RAM ပဲ ထည့်သွင်းပေးထားတာပါ။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန် Tablet တစ်လုံးကို Powerhouse PC လို မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဘဲထားဦး Bottleneck ဖြစ်မှာကတော့ ကျိန်းသေသလောက်ရှိနေပါတယ်။
Along with the Fingerprint Reader
Display : 12” sAMOLED with 2160×1440 Resolution
RAM 4GB :
Ports :2USB Type-C, microSD, 3.5mm Headphone Jack
Cameras : 8MP Rear, 5MP Front
Snapdragon 850 အသုံးပွုထားတဲ့ Galaxy Book2ကို Samsung မိတျဆကျ
Samsung ကတော့ အလနျးစား Specs တှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Galaxy Book2Tablet အသဈကို မိတျဆကျထားလိုကျပါပွီ။ တနျဖိုးအားဖွငျ့ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ ပဲရှိတယျ၊ Gigabit အမြိုးစား LTE စနဈလညျးပါတယျ၊ Laptop Display ထဲမှာတောငျ မွငျရခဲတဲ့ OLED Panel ပိုငျဆိုငျထားတာမလို့ Samsung Tablet က ကြောငျးသုံး၊ ရုံးသုံးနဲ့ Business သမားတှေ မကျြစိကွစရာ ဖွဈလာခဲ့ပွီလား?
မှနျတယျလို့ပဲပွောရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ Microsoft ကွညောထားတဲ့ Surface Pro6ထကျတောငျ ပိုဈေးသကျသာနသေလို Tablet တဈလုံး လိုအပျခကျြ၊ Function ပိုငျးခငျြး ယှဉျလိုကျမယျဆိုရငျ Samsung ပိုပွညျ့စုံနတေဲ့ အနထေားမှာရှိပါတယျ။
Windows 10 S သုံးထားတယျ၊ ဘကျထရီကလညျး နာရီ ၂၀ ဆကျတိုကျအသုံးခံတယျ၊ အသံပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး Dolby Atmos ထောကျပံ့ထားတယျ။ နောကျပွီး Galaxy Smartphone တှလေို Speaker တှကေို AKG နဲ့ ခြိနျညှိပေးထားတယျ၊ Fingerprint Reader လညျးပါတယျ။
ဒါတှပွေီးသှားရငျ အထငျကွီးစရာဖွဈလာတာက Stand အသဈ၊ သူ့ပုံစံက Surface Stand လို ထောကျကနျပေးနိုငျပွီး Angle ကို လိုသလို Adjust လုပျနိုငျမယျ။ နောကျပွီး Tablet နဲ့ တှဲသုံးနိုငျမယျ့ Magnetic Keyboard လညျးပါလာခဲ့တယျ။ ဒီ ၂ ခကျြက Galaxy Book2မှာ သိသာတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှလေို့ ပွောရမှာပါ။
ဒီ Galaxy Book2ကို အားမရဆုံးတဈခကျြက 4GB RAM ပဲ ထညျ့သှငျးပေးထားတာပါ။ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ တနျ Tablet တဈလုံးကို Powerhouse PC လို မစှမျးဆောငျနိုငျဘူးဘဲထားဦး Bottleneck ဖွဈမှာကတော့ ကြိနျးသသေလောကျရှိနပေါတယျ။